Somaliland: Xukuumadda Oo Xalay Saqdii Dhexe Xadhig Kaga Jawaabtay Qabanqaabada Xaflad Loo Ballansanaa In Maanta Lagu Caleemo Saaro Suldaan Cusub - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xukuumadda Oo Xalay Saqdii Dhexe Xadhig Kaga Jawaabtay Qabanqaabada Xaflad Loo...
Ciidammada Booliska Oo Xalay Gelin-dhexaadkii Gurigiisa Kala Baxay Xaaji Cumar Xaaji Daahir (Taraydh) Oo Suldaannimo Maanta Isu Diyaarinayay Iyo Sababta Xadhigiisa Oo Ay Ku Xidhiidhisay Wareegto La Weriyey In Wasiirka Daakhiligu Ku Mamnuucay Caleemo-saarka Madax-dhaqameedka
Xukuumadda Somaliland ayaa xalay habeen badhkii xabsiga u dhigtay Xaaji Cumar Xaaji Daahir oo loo yaqaano (X. Cumar Taraydh), oo kamid ah odayaasha magaca ku leh Somaliland gaar ahaanna Hargeysa, kaasi oo dhawaan ay beeshiisu shaacisay in ay u caleemo saaraan Suldaan Cusub oo kusoo biira Salaadiinta reer Somaliland. Kaasoo xafladda caleemo saarkiisa sida qorshuhu ahaa loo ballansanaa in Maanta loo qabto xafladda cumaamadda lagu saarayo.
Goorta la xidhay iyo sababta xadhigiisa
Ciidamo ka tirsan booliska Somaliland ayaa Suldaanka cusub ee maanta loo ballansanaa caleemo saarkiisa xalay abaaro 11:00 iyo dheeraad kasoo xidhay gurigiisa oo kuyaalla xaafadda Xidigta ee degmada Maxamuud Haybe Ee magaallada Hargeysa, halkaas oo uu ku gudo jiray shirar uu qoyskiisa iyo xubnaha qabanqaabinayay xafladiisa la lahaa. Weriye Ka tirsan HUBAAL oo goobta tegey wax yar kadib markii ay ciidanku gudaha u galeen guriga Suldaanka cusub ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan buliisku ay guriga ku sugnaayeen xilligaaa.
Suldaankan cusub oo ay qaban qaabada xaflada caleemo saarkiisu afartii caano maal ee laoo dhaafay ka socotay magaaladda Hargeysa ayaa ciidanka boolisku kasoo xidheen gurigiisa oo ku yaalla xaafada Xidigta ee degmada Maxamuud Haybe ee magaaladda Hargeysa. Xiligaas oo ay gurigiia ka socdeen shirar loogu diyaar garoobayo xaflada caleemo saarkiisa oo sida qorshuhu ahaa loo ballansanaa Maanta oo Khamiis ah inay ka qabsoonto magaaladda Hargeysa.
Qaar kamid ah dadkii goob-joogeyaasha ahaa oo markii lasoo xidhayay suldaanka cusub ku sugnaa gurigiisa, oo wargeyska HUBAAL khadka telefoonka kula soo xidhiidhay ayaa u sheegay in kahor intii aan askartu u iman uu Genenka guud ee boolisku la soo xidhiidhay suldaanka cusub, isagoo u sheegay suldaanka sida ay goobjoogayaashaasi soo wariyeen, in la joojiyo caleemo saarka suldaanka, kaas oo suldaankuna ka aqbalay, hase ahaatee wax yar kadib ay kuwar heleen Saraakiil ka tirsan ciidanka booliska oo guriga soo galay, iyagoo ku war geliyay in ammar dawladdeed uu xaaji Taraydh ku xidhan yahay. “goor dhaweyd ilaa 11:00 ayaa suldaankii la kaxeeyay oo wuu xidhan yahay, sababtana waxa la yidhi waxa soo amray xadhigiisa wasiirka daakhiliga iyo taliyaha ciidanka booliska, hase yeeshee ma garanayno wax eed ah iyo wax dembi ah oo lagu haysto, marka laga reebo in suldaanka ay dadkiisu Berri (Maanta) caleemo saarayaan.” Sidaa waxaa wargeyska Hubaal khadka Teleefanka ugu sheegay Mud. Xasan Ibraahim Ciise oo kamid ahaa masuuliyiintii la joogtay suldaan Cumar taraydh markii gurigiisa laga xidhayay. Mar aanu waydiinay sharciyada xadhigiisa loo cuskaday iyo halka uu ku xidhan yahay waxa uu yidhi; “Annagu wax waaran ah oo ay boolisku siteen maanu arag, nalamana tusin, waxay noo sheegeen oo keliya in suldaanku amar dawladeed ku xidhan yahay, waana lanaga kaxeeyay oo saldhiga ayuu ku jiraa, gogoshiina waanu ka daba gaynay.” Masuulkani mar uu ka hadlayay sida ay u arkaan xadhigaas iyo saamaynta taban ee uu ku yeelanayo hawshoodii qabanqaabada caleemo saarka ee qorshuhu ahaa in maanta lagu fooladeeyo, waxa uu yidhi “way cadahay in aanay sharciyada waafaqsanayn sidan loola dhaqmayo, sidaa daraadeed Annagoo ixtiraamayna sharciga, nabadgelyadana ilaalinayna, waxaanu ku qancinay in suldaanku raaco, laakiin qorshahayagu waa halkiisii oo haddii lasoo deyn waayo iyo haddii kaleba xafladayada waanu qabanaynaa.” Ayuu hadalkiisa kusoo xidhay
Muxuu taliska boolisku ka yidhi xadhiga xaaji Cumar taraydh?
Si aanu warkan u xaqiijino waxaanu dhinacooda la hadalnay taliska booliska, annaga oo wax ka waydiinay xadhiga Cumar taraydh iyo sababta, mid kamid ah saraakiisha sare ee booliska oo aanu khadka teleefanka kula xidhiidhnay ayaa noo xaqiijiyay jiritaanka warkaasi, isaga oo xadhigiisana ku sababeeyay go’aan ay xukuumaddu soo saartay dhawaan oo sheegayay inaan madaxdhaqameed dambe lagu caleemo saari Karin Somaliland ilaa amar dambe, maadaama oo aanay jirin duruuf keenta, sidaa darteedna iyadoo laga duulayo wareegtadaas lasoo xidhay ninkan la caleemo saarayay.
Xaaji Cumar taraydh ayaa kamid ahaa odayaasha magac ku leh Somaliland, isla markaasina ka tirsanaa ganacsatadii soo jireenka ahyd ee dalka, ayaa xiligan ay beeshiisu u caleemo saaraysay xilkan uu xadhiga ku mutaystay.
Xaaji Cumar Xaaji Daahir